Umshini Welebhu, Umshini Wokuqala Wokukhiqiza, Imodyuli - Xipingzhe
I-XPZ inethimba lobuchwepheshe elinolwazi oluningi locwaningo nentuthuko. Singumhlinzeki ophambili kuziphathimandla zokuhlola zamaShayina namabhizinisi amakhemikhali, okwamanje, uhlobo lwe-XPZ selusakazeke nakwamanye amazwe amaningi, njenge-India, i-UK, iRussia, iSouth Korea, i-Uganda, iPhilippines njll.
I-XPZ, ibeka amazinga amasha embonini.
Laboratory glassware Washer nge conductivity m ...
Okuzenzakalelayo Laboratory Glassw ...
Benchtop Washer nge ukuvulwa okuzenzakalelayo kanye close ...
Benchtop Washer Ububanzi ap ...
Undercounter FlaskScrubber Glassware imshini wit ...
I-Undercounter Flask Scrubber ...
Amazinga amathathu glassware Washer nge Modular bask ...
Amazinga amathathu ukugeza i-glassware ...
Washer Laboratory ne ketshezi ohambisa ai hot ...
Umshini welebhu nge-liqu ...
I-laboratory washer enezicabha ezimbili ingavuleka ku-cl ...
Umshini welebhu ngamabili ...
I-Laboratory glassware washer Smart-1
Incazelo yomkhiqizo we-Smart-1 ...
Laboratory glassware washer nge hot air omiswe ...
Incazelo yomkhiqizo: Smart -...
I-XPZ ingumkhiqizi ohamba phambili we-laboratory glassware washer, etholakala e-Hangzhou China. I-XPZ igxile ekucwaningeni, ekukhiqizeni nasekuhwebeni i-othomathikhi ye-glassware washer esetshenziselwa ukudla, ezokwelapha, ukuhlolwa kwemvelo, ukuhlaziywa kwamakhemikhali nezilwane zaselabhorethri ..
Ilabhorethri inemodyuli entsha, asikho isidingo sokwesaba ithubhu yokuhlola noma amapayipi amaningi
Into etholakala yonke indawo elabhorethri yimikhumbi ehlukahlukene yokuhlola. Amabhodlela namakani, imininingwane ehlukile, kanye nokusetshenziswa okwehlukile kuvame ukwenza abasebenzi bokuhlanza balahlekelwe. Ikakhulukazi ukuhlanzwa kwamapayipi kanye namashubhu okuhlola kuma-glassware kuhlala kwenza abantu baqaphele. Njengoba ukusebenza okuningi ...
Qaphela ekusetshenzisweni kwamaglasi e-laboratory, yini ongayinaki
UDing, ding, bang, wephule elinye, futhi leli elinye lamathuluzi ajwayelekile kakhulu ebhodini lethu, i-glassware. Ungayihlanza kanjani i-glasswares nokuthi ungomisa kanjani. Kunezinto eziningi okufanele uzinake ngesikhathi sokusebenzisa, uyazi? Ukusetshenziswa kwe-glassware ejwayelekile (I) iPipette 1. Ukuhlukaniswa: Ipayipi lemaki elilodwa ...
Ingabe imiphumela yokuhlola ihlale inganembi? Okubalulekile ukwenza lezi zinto kahle
Ngokuthuthukiswa komnotho nomphakathi, ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezahlukahlukene, ngakho-ke izimboni noma imikhakha efana ne-CDC, ukuhlolwa kokudla, izinkampani ezithaka imithi, izikhungo zocwaningo lwesayensi, ukuvikelwa kwemvelo kwemvelo, izinhlelo zamanzi, izinhlelo zepetrochemical, izinhlelo zokuphakela ugesi, njll. ...
Ubhadane lwenoveli i-coronavirus luyaqhubeka nokusabalala, izikhungo eziningi ze-laboratory yezokwelapha ziqala ukusebenzisa i-washer ye-laboratory ezenzakalelayo.
UJun / 22/2020
Ubhadane lwezifo olwaqubuka entwasahlobo ka-2020 lusongela impilo yaso sonke isintu. Ukuqhamuka kwenoveli iCoronavirus sekudale izifo ezingaphezu kwezigidi eziyisithupha emhlabeni jikelele. Bangaphezu kuka-300,000 abantu asebeshonile, futhi ochwepheshe abaningi abanathemba lokuthi ubhadane luzophela maduze ...
Kufanele zihlanzwe kanjani izinsimbi zaselebhu
Meyi / 26/2020
Abasebenzisi kufanele baqonde ukuthi ukunakekelwa kwensimbi nokugcinwa kuyikhono eliyisisekelo. Ngenxa yokulungiswa kwensimbi okuhle, okuhlobene nezinga eliqinile lethuluzi, izinga lokusetshenziswa kanye nezinga lempumelelo lokufundisa kokuhlola, njll. Ngakho-ke, ukususwa kothuli nokuhlanzwa yizinto ezivelele ze-instr ...